Puntland oo duulimaad caalami ah ka daahfurtay magaalada Boosaaso.
June 9, 2021 Xuseen 13
Puntlandtimes (Boosaaso)-Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa si rasmi ah looga daahfuray duulimaad caalima ah oo si toos ah isugu xiri doona magaalooyin katirsan dalka Imaaraadka Carabta iyo Puntland gaar ahaan Boosaaso.
Wasiirka duulista hawada iyo garoomada dowladda Puntland Ilyaas Cismaan Lugatoor oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa si rasmi ah u daahfuray duulimaadkaan caalamiga ah oo ay shirkadda Halla Airlines ka bilowday gudaha Puntland.
Mudane Lugatoor ayaa waxa uu sheegay in Duulimaadkan uu noqon doona mid joogto ah, isla markaana isku xiri doono Magaalada Shaariqa oo ka tirsan dalka Imaaraadka Carabta iyo Boosaaso ayna diyaaraddu si toos ah isaga kala gooshi doonto labadaasi magaalo.
Wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland ayaa waxa uu sheegay in duulimaadka cusub ee ku soo kordhiyeen Garoonka diyaaradaha Boosaaso uu hirgeli doono maalin walba oo Talaado ah ayna shacabku ka faa’iidaysan doonaan.
Aar kuwanaa dhabayaco dhabar mcn faan & faatabakh nagu dileenba
Anaa kaa xaal marinaya ninka reer Puntland oo ku nacay kuna yiri anigu dameer dooni maayo.
Dhib ma leh abaayo dameer reerkiina ah anaa kuu raadinaya.
Waa arrin fiican waana arrin bogaadin mudan.
Waa war lagu farxo ka duwan midkii shalayto kasoo yeeray puntland oo ahaa lacagtii qaran ka dhaxaysay ayaa wadooyinka puntland lagu qubay. Ee puntland waa muraayada kaliya ee ku dayashada muddan hada jira marka laga reebo maamulkii falaagoobay ee somaliland.
Aan saxo macluumaadkaaga
Ma jiro waddan la yiraahdaa maamul falaagoobay, waxaa jira waddan la yiraahdo Jamhuuriyadda Somaliland, oo an ku xirnayaan Federaalka Soomaaliya Sida Puntland. Waxay ka horaysay Soomaaliya inteeda kale Wa waddanka ay Puntland rabto inay ku dayato.
Adigaa saxid ubaahan , oo aadan garan waxa aad ku falaagowday, somaliland waxay heshiis lagashay somali markey u aragtay in aysan ka maarmin koonfur in ay wax isku darsadaan, Hadaba mudo kadib somaliland waxay go,aan sadeen in ay u dhaqmaan sidii habar ka carootay odeygeedi dabaddedna tiri anigu waan madax banaanahay cidaan doono ayaan la heshiin kii aan doono guri geyga ayaan ku soo dhaweyn odeygii somaliyeed iyo heshiiskiisa waan iska fasaqay si bilaa heshiis ah iyo bilaa maxkamad ah 😄 ee adigu makula saxan tahay waxaa ugu yar oo kala tagi karo waa qoys ama labo qofood oo wax ku heshiiyay . Haday kala tagayaan waa in loo maraa wadadii lagu heshiiyay in ay ku heshiyaan in ay kala tagaan hadii kale odeygii somalia ayaa odey kuu ah . Kkķkkkk
Aqoon yahanow sxb taariikhda dib ugu laabo,
Kkkkkk sxb tariikh dee kii ma kii caruurta somaliland maskaxda looga dhaqay . Mise midkii aan wada ogeyn oo aan kaftan ku daray, sxb mid ogow somaliland waxay istaahishaa in dowlad
Gaar ah noqoto lakiin waxaa ka qaldan process kii loo marilahaa
Puntland hada wixii ka danbeeya doolar uun baa la isticmaali, loomana baahna shilling musuqmaasuq ah, xataa kan xaabada keena doolar baa la siin.
Buuq iyo sicir barar waa dhamaaday.
Abti, waa ku sidee.. Boqorada reer PUNTLAND hablaha ma caayi jidhin, ee waa kool-koolin jireen. Gabadha xaal see, ileey waa kontaleeey..
Abti gabar maaha waa dameer iiduur ah naag oo magac naageed soo qaatay. Dadkaan anagaa kaa naqaana.
FARXIYO WAA QOFKA SOO QAADAN JIRAY MUBARAIK MA NIN BAA MA NAAG?????
IIDOOR WAA OGYIHIIN AQOONSI WAXAA U DIIDAY PUNTLAND.